7 suggerimenti biblici per coltivare vere amicizie | PREGHIERA&NEWS
7 Ndụmọdụ dị n’Akwụkwọ Nsọ maka Culzụlite Ezi Ndị Enyi
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 23, 2020 Ọktoba 23, 2020
"Ọbụbụenyi na-esite na mkpakọrịta dị mfe mgbe mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa na-achọpụta na ha nwere ọhụụ ma ọ bụ mmasị ma ọ bụ ọbụna uto nke ndị ọzọ anaghị ekekọrịta na nke ahụ, ruo oge ahụ, onye ọ bụla kwenyere na ọ bụ akụ nke aka ha (ma ọ bụ ibu ibu ha) ). Uzo a na-egosiputa mgbe anyi na-enwe Enyi ga-adi ka, 'Gini? Gị onwe gị kwa? Echere m na ọ bụ naanị m. '”- CS Lewis, Ndị Anọ Hụrụ n'Anya
Ọ bụ ihe magburu onwe ya ịchọta onye òtù ọlụlụ nke ya na anyị na-emekọ ihe ọnụ nke na-emecha ghọọ ezigbo ọbụbụenyi. Agbanyeghị, enwere oge mgbe ịme ọbụbụenyi na-adịgide adịgide adịghị mfe.
Maka ndị toro eto, ndụ nwere ike iji ọrụ n’aka na itule ọrụ dị iche iche n’ebe ọrụ, n’ụlọ, n’ezinụlọ, na n’ihe omume ndị ọzọ. Chọta oge iji zụlite ọbụbụenyi nwere ike isi ike, ọ ga-adịkwa ndị anyị na-esiri ike ijikọ. Me ezi ọbụbụenyi na-ewe oge na mgbalị. Ànyị na-ebute ya ụzọ? Enwere ihe ndị anyị nwere ike ime iji bido ọbụbụenyi anyị?
Eziokwu nke sitere na Bible pụrụ inyere anyị aka mgbe ọ na-esiri ike ịchọta, imete enyi, na ịnọgide na-enwe ya.
Gịnị bụ ọbụbụenyi?
"Onye nwere enyi nke kwesiri ntukwasi-obi g soonnwe nbibi, ma ọ di onye-enyi nke nọ nso kari nwa-nne nwoke" (Ilu 18:24).
Njikọ dị n’etiti Chineke Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ na-ekpughe ịdị nso na mmekọrịta nke anyị niile chọrọ, Chukwu na-akpọkwa anyị ka anyị soro na ya. Emere ndi mmadu ka ha buru ndi nnweko dika ndi n’eburu chi ato n’ime otu ma kwuputara na odighi mma ka mmadu no n’onwe ya (Jenesis 2:18).
Chineke kere Iv inyere Adam aka ma soro ha jee ije n'ogige Iden tupu ọdịda ahụ. Ya na ha nwere mmekọrịta ma ha na ya nwee mmekọ. Ọbụna mgbe Adam na Iv mehiesịrị, ọ bụ Onye-nwe buru ụzọ makụọ ha ma kpughee atụmatụ Ya nke mgbapụta megide ajọ onye ahụ (Jenesis 3:15).
Emere ka ọbụbụenyi gosipụta nke ọma na ndụ na ọnwụ Jizọs, Ọ sịrị, “Ọ nweghị onye nwere ịhụnanya ka ukwuu karịa nke a, nke nyefere ndụ ya maka ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu emee ihe m nyere n’iwu. Adịkwaghị m akpọ unu ndị ohu, n'ihi na onye na-eje ozi amaghị ọrụ nna ya ukwu. Kama akpọrọ m unu ndị enyi, n'ihi na ihe niile m mụtara n'aka Nna m emewo ka unu mara ”(Jọn 15: 13-15).
Jizọs mere ka anyị mata onye ọ bụ, o gbochighịkwa ihe ọ bụla, ọbụnadị ndụ ya. Mgbe anyị sooro ma rubere Ya isi, a na-akpọ anyị ndị enyi Ya. Ọ bụ ịma mma nke ebube Chineke na nnọchite anya nke ọdịdị Ya (Ndị Hibru 1: 3). Anyị pụrụ ịmata Chineke n'ihi na ọ ghọrọ anụ arụ wee mee ka anyị mata ya. O nyere ndụ ya n'ihi anyị. Bụ ndị Chineke mara ma hụ anyị n’anya na ịkpọ anyị ndị enyi Ya kwesịrị ịkwali anyị ịbụ ndị enyi nke ndị ọzọ n’ihi ịhụnanya na nrube isi nye Jizọs. Anyị nwere ike ịhụ ndị ọzọ n’anya n’ihi na Ọ bu ụzọ hụ anyị n’anya (1 Jọn 4:19).
Wayszọ asaa iji mepụta ọbụbụenyi
1. Ekpere maka ezigbo enyi ma ọ bụ abụọ
Anyị arịọla Chineke ka anyị mete ndị enyi? Ọ na-elekọta anyị ma mara ihe niile anyị chọrọ. O nwere ike ịbụ na ọ gaghị abụ ihe anyị chere n’ekpere.
Na 1 Jọn 5: 14-15 ọ na-ekwu, sị: “Nke a bụ ntụkwasị obi anyị nwere n’ebe ọ nọ, na ọ bụrụ na anyị arịọ ihe dị ka uche ya si dị, ọ na-ege anyị ntị. Ọ bụrụkwa na anyị maara na ọ na-anụ olu anyị n’ihe ọ bụla anyị rịọrọ ya, anyị maara na anyị nwere arịrịọ ndị anyị rịọrọ ya “.
N’okwukwe, anyị nwere ike ịrịọ Ya ka O mee ka mmadụ bata n’ime ndụ anyị ka ọ gbaa anyị ume, maa anyị aka, ma gaa n’ihu na-egosi anyị Jizọs. Anyị na-atụ anya na Chineke ga-eme ihe karịrị akarị nke anyị nwere ike ịrịọ ma ọ bụ were n'echiche site n'ike Ya na-arụ ọrụ n'ime anyị (Ndị Efesọs 3:20).
2. Chọọ amamihe dị na Baịbụl banyere ọbụbụenyi
Bible jupụtara n’amamihe, akwụkwọ Ilu nwekwara ọtụtụ ihe ikwu banyere ọbụbụenyi, gụnyere ịhọrọ ezi ndị enyi na ịbụ enyi. Kwue maka ezigbo ndụmọdụ si n’aka enyi: “N’isisi na-esi isi n andsì ụtọ na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ na-eme ka obi joyụrịa, ọ'sụ nke enyi na-esite na ndụmọdụ si n’ezi obi” (Ilu 27: 9).
Ọ na-adọkwa aka ná ntị megide ndị nwere ike imebi ọbụbụenyi: "Onye ajọ omume na-akpali esemokwu, asịrị na-ekewakwa ezigbo ndị enyi" (Ilu 16:28) na "Onye ọ bụla nke na-akwalite ịhụnanya na-ekpuchi mmejọ, mana onye ọ bụla kwughachiri okwu ahụ na-ekewa ndị enyi nso ”(Ilu 17: 9).
N’agba ohu, Jisos bu onye nnem kachasi n’ihe imetu mmadu n’obi. Ọ na-ekwu, "Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya karịa nke a: ịtọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya" (John 15:13). Site na Jenesis ruo Mkpughe, anyị na-ahụ akụkọ banyere ịhụnanya Chineke na ọbụbụenyi ya na ndị mmadụ. Ọ na-achụ anyị mgbe niile. Ànyị ga-achụso ndị ọzọ nwere ụdị ịhụnanya ahụ Kraịst nwere maka anyị?
3. Bụrụ enyi
Ọ bụghị naanị banyere iwuli elu anyị na ihe anyị ga-enweta site na ọbụbụenyi. Ndị Filipaị 2: 4 kwuru, sị, "Ka onye ọ bụla n'ime unu na-elekwasị anya ọ bụghị naanị maka ọdịmma nke ya, kamakwa maka ọdịmma nke ndị ọzọ" na 1 Ndị Tesalonaịka 5:11 kwuru, "Ya mere na-agbarịta ibe unu ume ma na-ewulirịtanụ ibe unu elu, dịka unu na-eme n'ezie."
Enwere ọtụtụ ndị nọ naanị ha na nsogbu, na-achọ enyi na onye ị ga-ege ntị. Nye ka anyị ga-agọzi ma gbaa ume? O nwere onye anyị kwesịrị ịma? Ọ bụghị ndị niile anyị ma ama ma ọ bụ ndị anyị ga-enyere aka ga-abụ ezigbo ndị enyi. Otu osila dị, akpọrọ anyị ka anyị hụ ndị agbata-obi anyị na ndị iro anyị n'anya, na ijere ndị anyị zutere ozi na ịhụ ha n'anya dịka Jisọs si hụ ha.
Nte Rome 12:10 ọdọhọde: “Ẹda ima nditọete ẹnyene ima. Na-asọpụrụnụ ibe unu na-asọpụrụ ibe unu. "
4. Na-ebute ụzọ
Iwere nzọụkwụ na-esiri anyị ike. Kingrịọ ka mmadụ zute kọfị, kpọọ mmadụ ka ọ bịa n’ụlọ anyị, ma ọ bụ mee ihe anyị chere ga-enyere mmadụ aka inwe obi ike. Enwere ike ịnwe ụdị mgbochi niile. Ikekwe ọ na-emeri ihere ma ọ bụ ụjọ. Ikekwe enwere ọdịbendị ma ọ bụ nke mmekọrịta ọha na eze nke kwesịrị ka agbaji, ajọ mbunobi nke ọ dị mkpa ka a maa aka ma ọ bụ na anyị kwesịrị ịtụkwasị obi na Jizọs ga-anọnyere anyị na mmekọrịta anyị niile.
O nwere ike isi ike na isoro Jizọs adịghị mfe, mana ọ nweghị ụzọ ka mma iji bie ndụ. Anyị kwesịrị ịbụ ndị na-ama ụma imeghe obi na ụlọ anyị nye ndị gbara anyị gburugburu, na-egosi nnabata ọbịa na obi ọma ma hụ ha n'anya dịka Kraist si hụ anyị n'anya. Ọ bụ Jizọs bụ onye malitere mgbapụta ahụ site n'ịwụkwasị anyị amara Ya mgbe anyị ka bụ ndị iro na ndị mmehie megide Chineke (Ndị Rom 5: 6-10). Ọ bụrụ na Chukwu nwere ike inye anyị ụdị amara a pụrụ iche, anyị ga-enye ya ndị ọzọ.
5. Na-achụ àjà
Jizọs na-akwagharị mgbe niile site n'otu ebe ruo ebe, na-ezute ndị ọzọ karịa ìgwè mmadụ ahụ ma na-egbo mkpa anụ ahụ na nke ime mmụọ ha. Kaosinadị, ọ na - achọta oge iji soro Nna Ya nọrọ n’ekpere na isoro ndị na - eso ụzọ Ya. N’ikpeazụ, Jizọs biri ndụ ịchụ aja mgbe Ọ na-erubere Nna Ya isi ma tinye ndụ Ya n’elu obe maka anyị.
Ugbu a, anyị nwere ike ịbụ ndị enyi Chukwu n’ihi na ọ nwụrụ maka mmehie anyị, na-eme ka anyị na ya dị n’ezigbo mma, anyị kwesịrị ime otu ihe ahụ ma bie ndụ na-echu anyị ụra karịa, maka Jizọs ma na-anaghị achọ ọdịmma onwe ya n’ebe ndị ọzọ nọ. Site na-ịbụ ndị agbanwere site n'ịhụnanya nke Onye-nzọpụta, anyị nwere ike ịhụ ndị ọzọ n'anya na itinye ego n'ime ndị mmadụ dịka Jisọs mere.
6. Guzosie n'akụkụ Enyi na mgbago
Ezi enyi kwụ chịm, ọ ga-anọkwa n’oge nsogbu na ihe mgbu, ma n’oge ọ joyụ na n’ememme. Ndị enyi na-ekerịta ihe akaebe na nsonaazụ ma na-egosipụta nghọta na eziokwu. Ọbụbụenyi chiri anya dị n'etiti Devid na Jonatan na 1 Samuel 18: 1 gosipụtara nke a: "Ozugbo ọ gwasịrị Sọl okwu, mkpụrụ obi Jọnatan na mmụọ Devid dị n'otu, Jọnatan hụkwara ya n'anya dị ka mkpụrụ obi ya." Jonathan ama ọfọn ido ye David ke ini ete esie, Saul, okoyomde David. David tụkwasịrị Jonathan obi iji nyere nna ya aka ikwenye, kamakwa ịdọ ya aka na ntị ma ọ bụrụ na Sọl ka nọ mgbe ọ nwụsịrị (1 Samuel 20). Mgbe e gbusịrị Jonatan n'agha ahụ, Devid nwere mwute, nke gosipụtara omimi nke mmekọrịta ha (2 Samuel 1: 25-27).
7. Cheta na Jizọs bụ enyi ikpeazụ
O nwere ike isiri anyị ike imeta ezigbo ọbụbụenyi, mana n'ihi na anyị tụkwasịrị Onyenwe anyị obi ka o nyere anyị aka na nke a, anyị kwesịrị icheta na Jizọs bụ ezigbo enyi anyị. Ọ na-akpọ ndị kwere ekwe ndị enyi ya n'ihi na o megheere ha ụzọ ma ghara izobe ihe ọ bụla (John 15: 15). Ọ nwụrụ n'ihi anyị, ọ hụrụ anyị n'anya na mbụ (1 John 4: 19), ọ họọrọ anyị (John 15: 16), na mgbe anyị ka dị anya n'ebe Chineke nọ, o wetara anyị nso site n'ọbara ya, wụsara anyị maka obe (Ndị Efesọs) 2:13).
Enye edi ufan mme anam-idiok onyung owongode ke nnyin idikpongke mmo ikpong mmo emi ekebuọtde idem ye enye.Ediongo akpaniko ye nsinsi edidi eke nnyin inwangde nnyin nditiene Jesus ke ofuri eyo nnyin, iyom ndifehe mbuba nsinsi.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa ma ị dị njikere ikwe ka Mmụọ Nsọ nke Eziokwu baa n’uche gị
Next Post → Post ozo:Oge nke ụbọchị: ịkwanyere ndị mmadụ ùgwù